ပန်ဒိုရာ: June 2013
ဆွမ်းဆန်နဲ့ ကြွက်ချေး ကိစ္စ
ဆွမ်းဆန် xxxxxxx…. ကြွက်ချေး xxxxxxxx….
နားလည်မှု (က) - ဆွမ်းဆန်ဟာ ကြွက်ချေးဖြစ်တယ်
နားလည်မှု (ခ) - ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောနေတယ်
၁။ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေး မရောဘူး။ ဆွမ်းဆန်ဟာ ကြွက်ချေးဖြစ်တယ် လို့ ပြောတာ မမျှတဘူး။
၂။ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေး မရောဘူး။ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောနေတယ် လို့ ပြောတာ မမျှတဘူး။
၃။ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောနေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆွမ်းဆန်ဟာ ကြွက်ချေးဖြစ်တယ် လို့ ပြောတာ မမျှတဘူး။
၄။ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောနေတယ်။ ဒါကြောင့် ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောနေတယ် လို့ ပြောတာ မျှတတယ်။
၅။ ဆွမ်းဆန်ဟာ ကြွက်ချေးမဖြစ်ဘူး။
၆။ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရောနေတယ်။
၇။ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးမရောဘူး။
၈။ ကြွက်ချေး (လို့ပြောတဲ့အရာ) ဟာ ကြွက်ချေးမဟုတ်ဘူး/ဟုတ်တယ်။
၉။ ဆွမ်းဆန် (လို့ပြောတဲ့အရာ) ဟာ ဆွမ်းဆန်မဟုတ်ဘူး/ဟုတ်တယ်။
၁၀။ ကြွက်ချေးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
၁၁။ ဆွမ်းဆန်ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
၁၂။ ရောခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
၁၃။ ဖြစ်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
၁၄။ ဘာသာစကားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
၁၅။ နားလည်မှုဟာ မှန်/မမှန်
၁၆။ ဖြစ်စဉ်ဟာ မှန်/မမှန်
၁၇။ ဖြေရှင်းပုံဟာ မှန်/မမှန်
ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေး ရော မနေလျှင်
နားလည်မှု (က) ရော (ခ) ပါ လက်မခံနိုင်
ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေး ရောနေလျှင်
နားလည်မှု (က) ကို လက်မခံနိုင်
နားလည်မှု (ခ) ကို လက်ခံနိုင်
ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေး ဘယ်သူ/ဘယ်လို ထည့်ထားသလဲ
ကြွက်ကို ဘယ်သူ/ဘယ်လို လွှတ်လိုက်သလဲ
ကြွက်ချေး ဘယ်လောက် ရောနေသလဲ
ကြွက်ချေးကို ဘယ်သူ/ဘယ်လို ဖယ်မလဲ
ဆွမ်းဆန်ထဲ အခြားချေးအမျိုးအစားသာ ရောနေခဲ့လျှင်ရော
ဘယ်လို ဖယ်နိုင်မလဲ/ ဖယ်လို့ရနိုင်ဦးမလား
ဥပမာ - ပိုးဟပ်ချေး၊ ကြောင်ချေး)
Posted by pandora at 2:49 PM3comments
လိမ္မော်သီးပုံကြီးတွေ၊ ဖိနပ်ပုံတွေ၊ ဘီးတွေ၊ ကတ်ကြေးတွေ၊ သော့ခလောက်တွေ၊ မျက်မှန်တွေ၊ လက်ကိုင်အိတ်တွေ၊ ခြုံစောင်ကြီးတွေ၊ ဆာရီတွေ၊ ဒိုတီတွေ၊ သတင်းစာတွေ၊ ထို့နောက် အမျိုးမျိုးသော စားဖွယ်သောက်ဖွယ်တွေ..
လော်ရီကားများ၊ တက္ကစီကားများ၊ ဘတ်စ်ကားများ၊ လက်တွန်းလှည်းများ၊ စက်တပ်စက်ဘီးများ၊ လန်ချားများ၊ မြင်းရထားများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ စက်ဘီးများ…
ဆိုက်ကားဟွန်းသံ၊ ဘက်ထရီဟွန်းများ နှိပ်သံ၊ စက်သံ၊ မော်တော်ကားများမှ လေဟွန်းသံ၊ လှည်းများမှ ခလောက်သံ၊ မြင်းရထားများမှ ချူသံ၊ လောက်စပီကာများမှ အသံ…
ကြေးနီ၊ မဂ္ဂနီစီယမ်၊ ကရိုမီယန်၊ အက်စဘက်စတော့၊ ဘောဇိုက်၊ ဂရဖိုက် စသည်တို့အပြင် ဟိမဝန္တာမှ အဖိုးတန်သစ်များ၊ အာသံပြည်နယ်နှင့် ဒါဂျီလင်မှ လက်ဖက်ခြောက်နှင့် ကမ္ဘာ့ဂုန်လျှော်အထွက်၏ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်း…..
ဘင်္ဂလားမှ ဂျုံစပါးနှင့် သကြား၊ ဘီဟာနယ်မှ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အိန္ဒိယပြည်နယ်မှ သစ်သီးများ၊ ဘင်္ဂလားဒက်ရ်ှမှ ကြက်နှင့် ကြက်ဥများ၊ အန္တရာနယ်မှ အသားများ၊ သြရိယနယ်မှ ငါးများ၊ ဆန္ဒာပန်နယ်မှ ခရုများနှင့် ပျားရည်များ၊ ပတ္တနားနယ်မှ ဆေးရွက်ကြီးနှင့် ကွမ်းများ၊ နီပေါမှ ဒိန်ခဲများ…
ထောင်ပေါင်းများစွာသော၊ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများသည် ပန်းခြံများ၊ လမ်းမကြီးများ၊ လမ်းများ၊ လမ်းသွယ်များတွင် နေ့ရော ညပါ….. ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ဈေးသည်များ၊ အထမ်းသည်များ၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့များ၊ အမှိုက်ပုံများ၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ၊ ဈေးဆိုင်ကြီးများ၊ နတ်ကွန်းများ၊ ဘုရားကျောင်းငယ်များ….
မိန်းမတွေ၊ ယောင်္ကျားတွေ၊ ကလေးတွေ၊ တိရစ္ဆာန်တွေနှင့် လုံးထွေးနေသော သည်နေရာ… ရွှံ့တွေ၊ အညစ်အကြေးပုံတွေ၊ မြောင်းပုပ်တွေ၊ ကန်နံ့နှင့် အနံ့အသက်ပေါင်းစုံတွေ၊ အသံဗလံမျိုးစုံတွေ၊ အော်သံတွေ၊ ငိုသံတွေ၊ တဒိုင်းဒိုင်းထုသံတွေ၊ တဂျုန်းဂျုန်းမြည်သံတွေ၊ အသံချဲ့စက်အသံတွေ၊..
အမွှေးတိုင်တချို့ရယ်၊ ဂီးထောပတ် တစ်အိုးရယ်၊ အလောင်းပတ်ဖို့ ဖျဉ်စ ငါးကိုက်ရယ်၊ ကြိုးရယ်၊ စံပယ်ပန်းကုံး နှစ်ကုံးရယ်၊ ဂင်္ဂါမြစ်ထဲက ရေကိုခတ်ပြီး သူ့ပါးစပ်ထဲနဲ့ သူ့ခေါင်းကို လောင်းပေးဖို့ ရေထည့်တဲ့ မြေအိုးတစ်လုံးရယ်….
နှလုံးရောဂါ၊ မေးခိုင်ရောဂါ၊ အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါ၊ တိုက်ဖက်စ်ရောဂါ၊ ကာလဝမ်းရောဂါ၊ ကူးစက်တတ်သောရောဂါ စသည့် အသည်းအသန်ဖြစ်သော လူနာများ၊ မီးလောင်သည့်လူနာ၊ ခြေလက်တို့ကို ဖြတ်ထားရသည့်လူနာ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့် လူနာ…
သစ်သီး၊ ပန်းခိုင်၊ ပေါင်ဒါ၊ ရတနာအတု၊ ရေမွှေး၊ လှူဖွယ်ပစ္စည်းမျိုးစုံ၊ ရွှေရည်စိမ်ကြေးအိုး၊ ကစားစရာ၊ ငါးအရှင်နှင့် လှောင်အိမ်ထည့်သည့် ငှက်များ…
ခြေချောင်းတွင် စွပ်သည့် ခြေစွပ်ကလေးတစ်စုံ၊ နားဆွဲတစ်ရံ၊ နှာခေါင်းတွင် မြုပ်ရန် ဥဿဖရားကျောက်တစ်လုံး၊ ပယင်းဆွဲကြိုး တစ်ကုံးနှင့် သတို့သမီးများ ဝတ်လေ့ရှိသည့် မကိုဋ်တစ်ခု….. ထိုပစ္စည်းများအပြင် ဆာရီတစ်ထည်…. စပ်ပြားချဉ်နှစ်ထုပ်နှင့် ပါးဆိုးဆေးနှစ်ဘူး….
ကိုယ်ရေပြားရောဂါသည်များအတွက် ဆာလ်ဖာဆေးပြားအနည်းငယ်၊ အဆုပ်ရောဂါသည်များအတွက် ရိုင်ဖိုမီဆိုင်း ဆေးပြားများ၊ ငှက်ဖျားရောဂါသည်များအတွက် ကွီနိုင်ဆေးပြားများ၊ အရေပြားရောဂါများအတွက် လိမ်းဆေးဘူး အနည်းငယ်နှင့် အလွန်အမင်း အာဟာရ ချို့တဲ့နေသော ကလေးငယ်များကို ဝေငှရန်အတွက် ဗီတာမင် ဆေးပြားအချို့…..
ကြွက်ကလေး၊ ကြွက်ကြီး၊ ကြွက်ဝ၊ ကြွက်ပိန်၊ အမြီးကြီးတွေ တစ်ပေလောက်ရှိသည့် ကြွက်ထီးကြီးတွေ၊ တကျွီကျွီအော်နေသည့် ကြွက်ပေါက်စကလေးတွေ..
ရာပေါင်းများစွာသော ဦးခေါင်းခွံများ၊ ကျောရိုးများ၊ လည်ပင်းရိုးများ၊ လက်ဖျံရိုးများ နှင့် ခြေထောက်ရိုးများ၊ တင်ပါးဆုံရိုးကြီးများနှင့် ဒူးခေါင်းရိုးများ၊ လည်ပင်းနားမှ လူပုံသဏ္ဌာန် အရိုးများ…
ပုလင်းများ၊ ထမင်းအိုးကွဲ ဟင်းအိုးကွဲများ၊ ပန်းကန်ကွဲများ၊ ကျိုးပဲ့နေသော အသုံးအဆောင်များ၊ အုတ်ကြွပ်ကျိုးများ၊ သွားတိုက်ဆေးဘူးဟောင်းများ၊ အားကုန်နေသည့် ဘက်ထရီအိုးများ၊ သံဘူးခွံများ၊ ပလတ်စတစ် ဖိနပ်စုတ်များ၊ အဝတ်စုတ်များ နှင့် စက္ကူစုတ်များ …..
ဆေးရုံများ၊ အလှူခံဌာနများ၊ လေဘေးဒုက္ခသည် စခန်းများ၊ ကျန်းမာရေးဌာနများ၊ ကလပ်များ၊ ပလီများ၊ ဆေးပေးခန်းများ သို့ အပြေးအလွှားရောက်လာကြကာ စောင်တစ်ထည်၊ အဝတ်တစ်ခု၊ ဖယောင်းတစ်တိုင်၊ ဆန်တစ်ဘူး၊ ဆီတစ်ဇွန်း၊ သကြားတစ်ခဲ၊ ရေနံဆီတစ်ပုလင်း၊ မီးထည့်သည့် နွားချေးတစ်ခဲ….
“ဒါပေမယ့် ခက်တာက သပိတ်မှောက်တယ်ဆိုတာ လူဆင်းရဲတွေ လုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဗျ၊ လူချမ်းသာတွေမှ လုပ်နိုင်တာ”
“သူသာ ရာမယဏကို ရွတ်ရင် ကျွန်တော်တို့ နေ့မှန်းညမှန်းတောင် မသိချင်တော့ဘူး။ အဲဒီထဲမှာ ပါသလို တောတွေ၊ တောင်တွေ၊ ပင်လယ်တွေ၊ အင်းအိုင်တွေပေါ်ကို ဖြတ်သန်းနေသလားလို့ ထင်နေမိတယ်”
(အထက်ပါစာသားတွေ အားလုံးဟာ ဆရာမြသန်းတင့် ဘာသာပြန်ထားတဲ့ “သုခမြို့တော်”မှာ ပါတဲ့ နာမ်စကားလုံး အစုအဝေးတွေနဲ့ စကားပြောအချို့ကို ပြန်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်ကလည်း ဝတ္ထုထဲက စာသားပဲဖြစ်ပါတယ်။)
Posted by pandora at 7:01 PM 1 comments